Ugwu Fuji: Ukpụrụ, Nhazi na Nrụrụ Aka | Netwọk Mgbasa Ozi
O doro anya na ị hụtụla otu n'ime usoro ihe nkiri Japanese nke Ugwu Fuji. Ọ bụ ugwu mgbawa kachasị ama na Japan niile ma dị na mpaghara Shizuoka na agwaetiti Honshu. Aha ndị Japan zuru ezu bụ Fuji-san n'agbanyeghị na a na-akpọkwa ya aha ndị ọzọ dịka Fujisan, Fuji-no-Yama, Fuji-no-Takane na Huzi, na ndị ọzọ. N’akụkọ ihe mere eme niile a matala ya dịka otu ugwu ugwu mara mma n’ụwa, nke a emeela ka ọ bụrụ akara Japan.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị gbasara njirimara, njirisi ala na ọchịchọ ịmata ihe nke Ugwu Fuji.
2 Nkuzi nke Ugwu Fuji
3 Ugwu Fuji na-agbawa
Ọ bụ otu n'ime ugwu ugwu ndị ama ama na ụwa ma bụrụkwa isiokwu ugboro ugboro nke omenaala ndị Japan. A mara mba ọdịda anyanwụ niile na Ugwu Fuji. Elu kachasị elu ruru mita 3.375 ọ bụkwa ndị ọkà mmụta banyere ala na-arụkarị ọrụ depụtara ya. Nke a pụtara na ọ na-aga n'ihu na-egosi ihe ngosi nke ugwu mgbawa na-aga n'ihu na ọ pụtara na ọ gbawara maka afọ 10.000 gara aga. Ọ bụ ezie na nke a yiri ka ọ na-ahụ ọkụ ọkụ ọkụ, na-ekwu banyere ya ma ọ bụ site na mbara ala.
Ma ọ bụ na-arụsi ọrụ ike ugwu mgbawa na-enyocha site na oge nke geological oge. Nke a pụtara na erupe ga-abụrịrị oge na mbara ala na nke na-abụghị nke mmadụ. Maka ugwu ugwu, 100 afọ abụghị oge ma ọlị. Na mpaghara ugwu a bụ Kawaguchi, Yamanaka, Motosu, Shoji na Sai lake, ọ dịkwa n’ime Fuji-Hakone-Izu National Park, ndị kacha eleta na mba ahụ.
Ihe omimi nke ugwu a na-egosiputa nke oma. N’elu a anyị kwuru n’elu nwere ihu igwe ya. Ihu igwe a bụ tundra ma na-edekọ okpomọkụ sitere na -38 degrees 18 degrees. N’ime cone dum nke so na nkpuru ahihia ebe nkpuru ahihia bu ebe obibi otutu umu anumanu na osisi. O nwere otutu umu anumanu, rutere umu 37.
Nkuzi nke Ugwu Fuji
Ọ bụ stratovolcano ma ọ bụ ugwu mgbawa mejupụtara nke nwere ọtụtụ okwute, ntụ, na Lada siri ike. Ọ bụ ugwu mgbawa chọrọ puku kwuru puku na puku afọ maka ntọala ya ka anyị siri mara ya taa. Ọ dị n'etiti efere tektiọn atọ a maara dịka mbadamba North America, Euro-Asia na Philippine. Na mgbakwunye, ọ bụkwa kpọmkwem na Okhotk na Amuria obere efere.
Ekwu na ugwu a na-ekwu na ọ bụ ihe dịka afọ 40.000. Anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ugbu a akụkụ nke otu ugwu mgbapụta. Tupu e guzobe Ugwu Fuji, ugwu mgbawa ndị ọzọ na-arụ ọrụ ugbu a, dịka Ashitaka, Hakone na Komitake Ashitaka, Hakone na Komitake.
Mgbe mgbawa mgbawa dị iche iche emeela na oge ihe dika iri puku asato ka ejiri kee ugwu mgbawa ruru ihe dika mita 80.000 a maara dị ka Ko-Fuji. Ka oge na-aga, ihe dịka afọ 17.000 gara aga, nnukwu lava na-ekpuchi ya kpamkpam wee jiri nwayọọ nwayọọ rụọ Shin-Fuji ma ọ bụ New Fuji. Ndia nile bu uzo nke ugwu gabigara dika anyi maara ya ta.
N'ihi nke a, anyị nwere ike ịkpọ ugwu mgbawa ugbu a dị ka ngwaahịa sitere na mgbawa ugwu site na ịrịọ akwa akwụkwọ niile iji chụpụ ugwu mgbawa ndị gara aga. Nke a na - eduga anyị ịchọpụta na n’okpuru ugwu mgbawa dị ugbu a bụ ugwu mgbawa oge ochie nke anyị kpọtụrụ aha.
Ugwu Fuji na-agbawa
Edere njedebe ikpeazụ nke ugwu a na 1708. Otú ọ dị, nke a na-eme ka nkewa dị ka ugwu na-arụ ọrụ ebe ọ nwere nnukwu ihe ize ndụ mgbe ọ na-ebupụta fumaroles na-egosi ihe ịrịba ama nke ọrụ ala. Dabere na Mmemme Volcanism Global Smith na Institution Smithsonian, Enwetara ihe nsonye 58 ekwuputala ma achọpụtala 9 nke amachaghị nke ọma. Ihe a bụ ọrụ niile Oke Fuji rụgoro na ndekọ oge mmadụ.
N'oge ọ dị na mbara ala a, ọ bụ ugwu ọkụ na-agba agba dị ka imirikiti n'ime ha. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ugwu mgbawa niile na-arụ ọrụ mgbe ha dị obere ma ọrụ ha kwụsị ma ọ bụ belata afọ. Mgbe e guzobere Fuji ọhụrụ, enwere oge anaghị arụ ọrụ ruo ihe dịka afọ 5.000 gara aga. Ọ bụ mgbe ahụ ebe ugwu ahụ kwụsịrị maka inwe nnukwu ike ma ọ bụ nnukwu nnukwu lava tụbara. Ọmụmaatụ, otu n’ime ntiwapụ nke edekọtara na ugwu ugwu a mere na oge Jogan na 864. Mgbapụta a were ụbọchị 10 mgbe ọ na-atụba ntụ na ihe ndị ọzọ ruru ogologo.
Ọ bụrụ na n’oge ahụ ọnụ ọgụgụ ndị gbara ya gburugburu pere mpe, na-enyocha mbibi ọ nwere ike ibute taa, na-eme ka ọ bụrụ ugwu mgbawa dị elu. Ọ bụghị naanị ndị mmadụ kpebiri ihe ize ndụ nke ugwu mgbawa ma ọ bụ ihe ize ndụ ya ụdị rashes ma ọ bụ morphology ya, mana maka mbibi ọ nwere ike ibute. Nke ahụ bụ, ugwu mgbawa nwere ike wepu nnukwu gravel ma ọ bụ gas, mana enweghị ihe dị ndụ, mmadụ, akụrụngwa, wdg. nke nwere ike imebi, ihe egwu ya ga-adị obere. Dịka ọmụmaatụ, ugwu mgbawa nke dị n'etiti oke osimiri anaghị adịkarị ize ndụ.
Ihe mgbawa ikpeazụ nke Ugwu Fuji malitere na 1708 ọ bịara mara dị ka mgbawa nke Ugwu Fuji na oge Hōei nke oge a. Na mgbawa a, ọ naghị ebute lava na mpụga mana ọ chụpụrụ kilomita ash 0.8, bọmbụ mgbawa na ihe ndị ọzọ siri ike rutere Tokyo. Enwere ike ikwuputa ihe omume a site na ala ọma jijiji nke bu nke kachasị njọ na akụkọ ntolite niile nke Japan, na-agbaso nke abụọ na ala ọma jijiji mgbe nke ahụ mere na 2011. Kemgbe ahụ, ọ nweghị mgbawa egosipụtara na ugwu a.
Ugwu Fuji, ọ bụ ezie na e lere ya anya dị ka ugwu mgbawa, bụ ihe na-adọrọ mmasị ndị njem. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Ugwu Fuji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Fuji